Campi Flegrei oo ah supervolcano jiifta ayaa ka khatarsan sidii la filayay | Saadaasha Shabakadda
Dhowr bilood ka hor waxaan daabacnay maqaal ku saabsan sida Campi Flegrei way soo kacaysaa. Muddo dhowr sano ah, oo ay khubarada ku xeel dheer fulkaanaha ay kormeerayeen, waxay soo bandhigeysaa isbeddelada dhaqdhaqaaqa. Qiiqa gaaska qaarkood, heer kulka gudaha ka sii kordhaya, iyo culeysyo kale oo tilmaamaya in wax ay "rumayaan" halkaas. Campi Flegrei, oo aan ka aheyn uun volcano kasta, waa supervolcano. Ugu weyn Yurub. Oo ah baaxad iyo xoog sida uu baraarugiisa waxay sababi doontaa cawaaqib xumo weyn, kana baxsan gobolka, marka loo eego volcano-wadaagga.
Markan, khubaradii taas, waxay xaqiiqsadeen wax cusub. Waxay ku saabsan tahay heerka rabshad ee aad yeelan karto. La ogaaday hoostaga magaalada Pozzuoli isha suuragalnimada ee magma ee shiday markii ugu dambeysay. Waa isla goobta kaldera ee lagu soo bandhigey waxqabadkii ugu weynaa ee ka dhacay Campi Flegrei, 80-meeyadii oo ku beegnaa dhulgariirro ka dhacay aaggaas. Hadda arrintu waxay tahay, in kasta oo dabeecaddu is beddeshay, waxay kaa caawin kartaa saadaalinta sida iyo halka ay ka dhici karaan qaraxyadu haddii ay aakhirka soo baxaan
Cadaadiska kuleylka kuleylka ayaa sii kordhaya
Markan, cilmi baarayaashu waxay tuureen suurtagalnimada in cadaadiska uu ka dhex dhismayo kuleeliyaha laftiisa. Taasi waxay sharxi lahayd dhaqdhaqaaqa dhulgariirka ee aagga ka jira. Isla mar ahaantaana tani waxay keentaa in khatartu sidoo kale kordho. Mid ka mid ah kuwa mas'uulka ka ah shaqadan, Luca de Siena, oo ka socda Jaamacadda Aberdeen, ayaa xaqiijiyay waxyaabaha soo socda.
“Intii lagu jiray 30-kii sano ee la soo dhaafay dabeecadda fulkaanaha way isbedeshay. Wax walba way kululaadeen dheecaannada ku dhaca kuleylka oo dhan dartiis. Maxaa soo saaray waxqabadka ka hooseeya Pozzuoli 80-meeyadii wuxuu u haajiray meelo kale, sidaa darteed halista waxaa laga heli karaa agagaarka Naples, oo ah meel aad u camiran. "
Xaaladda hadda jirta ee Campi Flegrei, ereyo uu qaatay khabiirku, waa tan kariyaha cadaadiska hoostiisa. Lama ogaan karo baaxadda ay tani yeelan karto qarax mustaqbalka. Laakiin wax aan shaki ku jirin waa taas waxay ku sii kordheysaa qatar. Su'aasha ugu weyn maanta waxay noqon laheyd in magmada ay ku xayiran tahay kaldera gudaheeda, oo ay u guureyso aag ay dad ku badan yihiin, ama, waxaan rajeyneynaa, magma inuu u jiheysan karo dhanka badda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Kala bixid » Hurdada supervolcano Campi Flegrei waxay noqon kartaa mid ka khatar badan sidii la filayay